Global Voices teny Malagasy » Bilaogy Ampiasàna Lahatsary & Kambodza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2017 7:08 GMT 1	 · Mpanoratra Beth Kanter Nandika Candy
Eath Chhnon (fantatra ihany koa amin'ny hoe “Village Girl “) dia Kambodziana “mpanao bilaogy mampiasa lahatsary ” na vlogger . Lehibe tany amin'ny tanàna kely iray ao Kambodza any akaikin'i Angkor Wat , iray amin'ireo rakitra sarobidy ara-kolontsaina ho an'ny firenena. Tamin'ny 2003, teo amin'ny faha-20 taonany, nandeha nankany New York izy. Ataon'i Eath anaty bilaogy mampiasa lahatsary ny tantaran'ny fiainany .
1. Nahoana ianao no nanomboka nanao niblaogy mampiasa lahatsary?
Heveriko fa ny fanaovana bilaogy ampiasàna lahatsary dia fomba iray mahaliana hanehoana ny maha-ianao anao manokana ary fitaovana mety tsara hitondra ny feoko. Nanova ny fiainako tamin'ny fomba maro izy io. Afaka mifandray amin'olona vaovao aho, izay mizara fomba fijery sy zava-mahaliana ao anatin'ny fireneko. Sady koa, nihaona tamin'olona izay mety tsy ho nifanenàko mihitsy aho raha tsy tamin'io fomba io.
2. Ahoana no nianaranao nanao bialogy ampiasàna lahatsary?
Fony aho nipetraka tany Kambodza dia tsy mbola nikitika velively na nahita ny atao hoe solosaina – tanàna kely iray no nonenan'ny fianakaviako –tantsaha ry zareo ary tsy manana herinaratra. Rehefa tonga tany Etazonia aho, nianatra samirery ny fomba fampiasàna solosaina. Nanam-bintana aho nifanena tamin'i Ryanne Hodson  izay nampiseho tamiko ny fomba fanaovana azy . Nandany andro iray manontolo teo aho tamin'izany. Manana ny torolàlany ao anaty aterneto i Ryanne, ka dia afaka mianatra mora toy izay nataoko ny olona tsirairay.
3. Valiny toy inona no voarainao avy amin'ireo Kambodziana mijery ny bilaogin-dahatsarinao?
Nifandrohy taminà vavahadin-tserasera maro ny bilaogiko ka dia nahazo Kambodziana marobe aho hamaky sy haneho hevitra tao aminy. Nientanentana tokoa ry zareo. Naharay imailaka marobe aho nilaza tamiko hoe “Tiako ireo lahatsarinao!” Mametraka fanontaniaka marobe amiko izy ireo momba ny toerana nahalehibe ahy tao Kambodza. Aingam-panahy ho azy ireo ny nahalala fa tany aminà tanàna kely iray tao Kambodza aho no lehibe ary mipetraka any Manhattan.
Nanana namako akaiky ahy avy ao amin'ny tanànako aho izay mpamily fiara mpitondra mpizahatany ary nifindra monina nankany Eoropa. Kisendrasendra no nahitàny ny bilaogiko ary dia nametraka fanehoankevitra tao izy. Tena gaga be aho tafaresaka indray aminà namana iray efa taloha ela be.
4. Nahoana ianao no mihevitra fa tokony hanao bilaogy ampiasàna lahatsary ny olona ?
Betsaka ireo Kambodziana nandao an'i Kambodza ary tsy afaka mifandray mifankahita tava amin'ny fianakaviany izy ireny. Lafo ny fifandraisana an-telefaona ary raha manam-bintana ry zareo dia afaka mifanakalo imailaka. Fa ny bilaogy ampiasàna lahatsary no toy ny fifankahitàna tava kokoa ary fomba iray goavana hifandraisana indray amin'ny kolontsainao. Mazava loatra, tsy ny tsirairay ao Kambodza no manana fahafahana miditra aterineto. Ohatra, tsy afaka mahita ny bilaogiko ny fianakaviako – tsy mahay teny anglisy ry zareo ary tsy manana solosaina na fidirana aterineto, eny fa na herinaratra aza.
5. Inona no zavatra mety ho entin'ny bilaogy ampiasàna lahatsary ho an'i Kambodziana?
Heveriko fa ireo Kambodziana, na ao an-toerana izy na any amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao, dia tokony haneho ny heviny – ary mitantara amin'izao tontolo izao momba izay heviny rehetra, ny kolontsainy, ny zavatra niainany. Tsy betsaka ny Kambodziana manao bilaogy mampiasa lahatsary ary misy antony tsara mihitsy izany (ny fitaovana, ny tsy fahampian'ny fahafahana miditra aterineto, ny sakana apetraky ny teny, ny fahaizamanao, sns…) Izany eo ihany, fa tiako ny handrisika ireo Kambodziana hanao bilaogy ampiasàna lahatsary. Izay no antony nanombohako listserv  iray ho fanampiana ireo olona ao Kambodza hianatra ny fomba fanaovana azy io.
(Fanamarihana: Ary raha tsaraina avy amin'ny fifanakalozan-dresaka momba ilay lisitra, dia miomàna isika hahita bilaogy maro mampiasa lahatsary ho alefan'ireo Kambodziana ato ho ato.)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/19/102884/
 Village Girl: http://villagegirl.typepad.com
 Angkor Wat: http://www.angkorwat.org/
 tantaran'ny fiainany: http://villagegirl.typepad.com/village_girl/2005/07/the_story_of_my_1.html
 Ryanne Hodson: http://www.freevlog.org
 nampiseho tamiko ny fomba fanaovana azy: http://ia300033.us.archive.org/3/items/Village_Girl/eath.mov